The Blake School: Afka Soomaaliga
Muxuu Yahay Barnaamijka Learningworks?
Waxaa la aasaasay sanadkii 2000, LearningWorks waa iskaashi gaar ah oo ka dhexeeya Dugsiyada Dowlada ee Minneapolis iyo Blake School. Mashruucan lacag la'aanta ahi wuxuu u fidiyaa 500 oo saacadood oo tacliin kordhin ah ardayda aadka u dadaasha ee dhigita Dugsiyada Dowlada ee Minneapolis xiliga ay dhiganayaan fasalada 7aad iyo 8aad. LearningWorks waa barnaamij labo sano ah oo hawlgala xiliga kulaylaha iyo Sabtiyada qaarkood inta lagu jiro sanad dugsiyeedka caadiga ah.
Boqolkiiba 99% ardayda barnaamijka LW waa ay ka qalan jabiyaan dugsiga sare.
Boqolkiiba 83% ardayda barnaamijka LW waxay aadaan ama ka baxeen Jaamacad.
Cidee Ayaa Is Qori Karta Barnaamijka Learningworks?
LW waxay ka qabataa codsiyada ardayda hada fasalka 6aad ka dhigata Dugsiyada Dowlada ee Minneapolis ee jecel in ay wax bartaan doonayana in ay u go'doomaan in ay ka qayb galaan barnaamijkayaga labo sanadleha ah ee xiliga kuleylaha iyo sanad dugsiyeedkaba la dhigto. Codsiyadu waxay diyaar noqdaan bisha Nofeember go'aanada is qorida waxaa la soo saaraa bisha March. Kaliya waxaan ka qabanaa codsiyada ardayda fasalka 6aad dhigata, dhamaan ardayda la qaataana waxay bilaabaan ka hor fasalka 7aad inta aysan gaarin. Halkan ayaad ka heli codsiga halkan.
Muxuu Fidiyaa Brnaamijka Learningworks?
Labo sano oo tacliin dhisid lacag la'aan ah, oo u dhiganta 500 saac oo caawin ah.
Fasal ardayda dhigaa ay tiradoodu yar tahay (9-12 arday).
Fasalo xisaab, saynis, Ingiriis, barashada bulshada, iyo farshaxanka ah.
Gaadiid lacag la'aan ah oo geynaya ardayda kana soo celinaya LearningWorks.
Quraac iyo qado lacag la'aan ah xiliga kuleylaha iyo cuno fudud oo lacag la'aan ah. xiliga dugsigu furan yahay oo lagu jiro sanad dugsiyeedka caadiga ah.
Macalimiin arday ah oo leh tababarka loo baahan yahay si ay u caawiyaan ardaygaaga.
Gargaarka ardaydii hore ee dugsiga ka baxday si uu ardaygaagu u helo Jaamacad.
Maxay Yihiin Waxyaabaha Uu U Baahan Leaningworks?
Si uu uga qayb galo LearningWorks, ardaydu waa khasab in ay …
In ay qayb ka noqdaan LearningWorks mudo labo sano ah – taa macnaheedu waa ku khasab ardayda in ay maalin walba xaadir ku ahaadaan LearningWorks mudo lix asbuuc ah xiliga kuleylaha ka dib sanadaha ay dhiganayaan 6aad iyo 7aad iyo Sabtiyada qaarkood. Si aad u aragtid liiska taariikhaha hada ah, eeg halkan.
Si buuxda uga qayb gelied LearningWorks -- Xaadir ahaantu waa khasab, marka laga reebo markii ardaygu jiran yahay ama xaalad kadis ah ay la soo daristo.
Ka soo shaqeyn ilaa iyo saacad iyo bar shaqo guri ah habeen walba xiliga kuleylaha (ma jiraan wax shaqo guri ah xiliga sanad dugsiyeedka caadiga ah).
Ardayda ka soo bixi karta dhamaan balan qaadyadaas waxa ay ka qalin jabin doonaan LearningWorks xiliga gu'ga ah ee ay ku jiraan fasalkooda 8aad.
Su'aalo? Afka Soomaaliga
LearningWorks aad bay ugu faraxsan tahay in aad damacsan tahay in aad ka qayb qaatid barnaamijkayaga. Hadii wax su'aalo ah aad qabtid fadlan wac, isku xiraha waalidiinta ardaydu u dhigto LearningWorks iyo qoysaska Soomaalida ah Ubah Jama ee 612-872-7879.